mandalaygazette-editor-19 | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
» mandalaygazette-editor-19	0
- ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး
Posted by ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး on Feb 26, 2012 in |0comments
About ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး
ခြစ်တတ်တယ် ...။ မယုံရင် အုန်းသီး တစ်လုံး ယူဂဲ့ဘာ .. ငွင်းး ငွင်းး ...။
View all posts by ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး →	Blog
Comments By Postသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အလင်း ဆက် - TheWinner Getprizeအတ္တဆန် - အလင်း ဆက် - padonmarလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Ma Ma - TNAယုံလား? - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်မင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moePassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - Ma Ma - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - အလင်း ဆက် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - padauk moe - padauk moeရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - padonmar - Shwe Eiစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - TNA - အလင်း ဆက်မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - ခရီးသည်ကြီးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - ခရီးသည်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - မောင် ပေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77790 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58410 Kyats )MaMa (57746 Kyats )Top Posts & Pagesအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ်